R/wasaare kuxigeenka Somaaliya oo booqday Xarumo muhiim ah – Radio Daljir
Febraayo 27, 2018 12:58 g 0
Ra’iisalwasaare xigeenka Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya ahna ku-simaha Ra’iisalwasaaraha Md. Mahdi Maxamed Gulleid (Khadar) oo ka duulaya barnaamijka isla xisaabtanka ee Xukuumadda ayaa saaka kormeer shaqo ku tegey qaar kamid ah Xafiisyada hay’adaha laamaha dawladda, waxaana uu booqday Wasaaraddaha Aminga, Maaliyadda iyo Bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Ku Simaha Ra’iisalwasaaraha ahna Ra’iisalwasaare xigeenka Qaranku waxa uu kormeerkiisa ka bilaabay Wasaaradda Aminga. Wasiirudawlaha Wasaaradaasi Md. Xasan Macalin Xuseen ayaana halkaasi kusoo dhoweeyay isagoo uga xog-waramay shaqada ka Wasaarad ahaan ay qaranka u hayaan iyo hanaanka maalin-laha ah ee ay ku waajahaan hawlaha amniga iyo isku xidhkooda doorka kaga aadan.
Sidoo kale Ra’iisalwasaare xigeenka ayaa kormeerkiisa ku soo maray Wasaaradda Maaliyadda iyo Bangiga dhexe ee Soomaaliya. Wasiirka Maaliyada Md. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaana Ra’iisalwasaare Xigeenka warbixin ka siiyay shaqadda Wasaaradda, Dakhli ururinta iyo fulinta Barnaamijka dib-uhabaynta Maaliyadda ee Dawlada.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Xaaf oo gaaray Dhuusamareeb (Dhegayso/Sawiro)